Kwenzekani emzimbeni lapho uthola emnyama emehlweni?
Cishe isigamu sabantu okungenani kanye waquleka. Ngaphambi kwalokho, abantu ngokuvamile bakhala ngokuthi babe amehlo amnyama. Lokhu kwenzeka ngenxa yezizathu ezahlukene, kodwa evamile yokuthi igazi iyeke ukuphakela oxygen ebuchosheni ngenxa ukuncipha abukhali wegazi.
Yokufikelwa kuyaqabukela zenzeka ngaphandle izimpawu odlule. Ngokuvamile ngaphambili, indlela eyethile, umuntu azizwa isiyezi, lightheadedness, ukulahlekelwa kukuzwa, palpitations inhliziyo. Mhlawumbe ngisho isicanucanu nokuhlanza, amehlo abaningi amnyama. Othile usanda enye yalezi zimpawu lungase lubonwe kwezinye konke ngesikhathi esisodwa.
Wokulahlekelwa ukwazi, Umuntu ulahlekelwa imisipha ithoni. Lokhu kuholela yokuthi indoda owayo lapho emi phambi ekuqulekeni. Kukhona amacala niphele amandla esifushane, uma kukhona yezwakala emehlweni, indoda kuvaliwe imizuzwana embalwa, kodwa leso sikhathi le yengeza izitshengiselo ezivela kwamanye ubuchopho akanayo isikhathi ukufinyelela imisipha. Khona-ke yenzani kodwa angawi. Uma ukubukeka ezinye zezimpawu ngenhla bazokwazi ngokushesha ngisho ukuhlala phansi, kungenzeka ukuthi nakwisyncope kungagwenywa.
Ngezinye izikhathi kungaba encane ukudikiza izingalo noma imilenze. Ungesabi nakancane, lena akuyona isithuthwane. Uma umuntu ethatha evundlile, igazi ligeleze ingqondo yakhe ngokuvamile uyalulama ngokushesha - futhi imizuzu 1-2, lapho evuka. Nakuba umuntu kungase kubonakale, kube-Adalberto isikhathi eside.
Njengoba sekushiwo, kukhona niphele amandla abantu abaningi. Ezinye balithatha kalula. Futhi kuphela uma nakwisyncope ziqala ukwenzeka kaningi, abantu bayazibuza ukuthi kungani kuba mnyama emehlweni, bese uya kudokotela.
Uhlobo oluvame kakhulu niphele amandla odokotela ngokuthi "vasovagal", ngaleyo ndlela egcizelela ubuhlobo obuseduze obukhona phakathi komhlambi isimiso sezinzwa futhi imithambo yegazi. Kwenzeka ngenxa ukuxhumana reflex phakathi izinhlelo sezinzwa futhi senhliziyo. Ukusungula Imbangela udokotela nakwisyncope ngokuvamile lelandzisako eyanele enemininingwane lofakazi (uma ikhona), kanye incazelo eningiliziwe zonke izimo isiguli ngokwakhe.
Nokho, lo dokotela, ngokuvamile uqoka uphethe electrocardiogram noma echocardiogram wokuthi yadalwa zokugula inhliziyo. Kodwa ezimweni eziningi kuvela ukuba Izibikezelo evumayo. Izifundo yobuchopho (Bheka scan) usesimweni esinjalo (nge nakwisyncope reflex) ngokuvamile engenamsebenzi.
Ngaphezu reflex, ingabe yokufikelwa ezihambisana ehlome ushintsho inhliziyo isigqi, ukuhlukumeza we mitral valve noma ehambisana ne isifo sezinzwa uhlelo, njengesifo sikashukela noma Parkinson isifo. Isizathu nakho kungase kube imithi udokotela ukwelapha ezinye izinkinga zempilo. Ngenxa ezinye zezidakamizwa zingamsiza kungalindelekile ngokucijile encishisiwe ingcindezi ukuze ebukhali liphakama iziguli mnyama emehlweni futhi kukhona "umgubuzelo grey".
Umsebenzi oyinhloko udokotela uma isiguli kujika okhalazayo yokufikelwa, ngokushesha ngakususi senhliziyo (Ezimweni ezinjalo kukhona, ngenhlanhla, ezingajwayelekile). Khona-ke kwenziwa ucwaningo olubanzi ludingeka ukuxilonga ngokunembile isimo imisipha yenhliziyo noma valve. Ngokwesibonelo, yabamba okuqhubekayo eside (amahora angu-48), ukuqopha isigqi kanye nokuvama Kufinyeta of imisipha yenhliziyo Usebenzisa electrocardiogram. Prakthiza umsebenzi yokuhlola ku-treadmill ukuze ubone ukuthi isiguli ukufeza umthwalo. Nge lolu hlolo ukuthola idatha egcwele ku inhliziyo noma ukungabi oxygen kwenhliziyo ngesikhathi uzivocavoca.
Kuzo zonke izimo, uma uthola emnyama emehlweni, kubalulekile ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuthatha evundlile. Abantu abakhuluphele eduze, akumelwe sizame phakamisa ikhanda lesiguli. Kungcono ujike umuntu abasohlangothini lwakhe ukuze igazi odlula kangcono ikhanda lakho, khona-ke isiguli uzolulama ngokushesha.
Impatho efanele namathansela follicular
Kuyini Ollier isifo. Ollier sika isifo: ukuxilongwa kanye nokwelashwa
Ukuqina kwamathishu semithambo: izimbangela, izimpawu, ukwelashwa
Glomerulonephritis. izimpawu isifo
Umuthi 'Brufen ": yokusetshenziswa, ukwakheka, ukubuyekezwa
Imikhiqizo isikhumba bobusha: ukugcina ubuhle
Nokunye okuningi ekuphileni kwethu kwansuku zonke: zokwenziwa iraba
Luhlobo luni lokudla lokubeka izinkukhu ezifisa ukulusebenzisa endlini
Indlela yokuhlela abantu ukuthi kunzima kangakanani kuwe?
"Stellanin" (wamafutha): Yokusetshenziswa nempendulo
Anime "uSathane ingxenye isikhathi": izinhlamvu. "USathane ingxenye isikhathi": indaba
"Polisorb" yokungezwani komzimba: ukubuyekezwa, yokusetshenziswa